गोपाल खड्कालाई नियुक्ती देउ
Dharma Ratna Shrestha--ओली सरकार बनेपछि नालायक भनेर बर्खास्त गरिए : नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका कार्यकारी दिगम्बर झा । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको खासखुसपछि प्रचण्डले पनि निकासा दिनासाथ उनै दिगम्बर झालाई काविल भनेर नियुक्त गरिएको छ । वाह, ओली सरकार, अजव तिम्रो गजब चाला ?
यसअघिको सरकार कांग्रेसको थियो । रामचन्द्र पौडेलले मेरो सम्धि नै हुनुपर्छ भनेपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा कार्यकारी फेरिएका थिए । होइन, एमाले कार्यकारी भएन भने त ६ खर्ब खर्च गर्ने प्राधिकरण, एमालेलाई छटपटी भयो । ओलीले कांग्रेसका सम्धि फालेर उहिल्यै अयोग्य साबित भइसकेका र कांग्रेसले समेत अयोग्य भनेको सुशील ज्ञवालीलाई पुन: नियुक्ती दिएर ओलीले जात जनाएकै हुन् ।
एउटा काम बाँकी भो । नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद काण्डमा डेढ अर्व भ्रष्टाचार गरेको दाग लागेका गोपालबहादुर खड्कालाई किन पुननियुक्ति नदिने ?
जब सुशासन र समृद्धि भ्रष्ट भनिएका, अयोग्य ठहर भएका र आफन्त नै चाहिने भएपछि गोपाल बहादुर खड्का पनि त भ्रष्टका आफ्नै हुन क्यार ? उनले जति भ्रष्टाचार कसले गर्न सक्छ, कसले गर्न जानेको छ । त्यसकारण नेपाल आयल निगममा गोपाल बहादुर खड्कालाई पुननियुक्ति दिने हो भने ओली सरकारको दुई तिहाई होनहार रहेछ भन्न सकिन्छ । भ्रष्टाचारीजति सबै ओली सरकारका घरज्वाईँजस्ता रहेछन् भन्न अव अप्ठेरो मान्नु पर्दैन । ओलीका निर्णय यस्तै देखिए ।
कञ्चनपुरमा निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो रे । स्वयम् प्रधानमन्त्री शंका लागेका व्यक्तिको संरक्षण गर्न अघि सर्ने, प्रहरीको अनुसन्धानमा राजनीतिक दबाब दिने, सक्षम भनिएका आइजीपी सर्वेन्द्र खनाललाई अनुसन्धानमा बाधा हाल्ने भएपछि बलात्कारी र हत्यारा कसरी पक्राउ हुनसक्छ ? जसरी ३३ किलो सुन काण्डमा ३ जनाको हत्या भएपछि र सयौं त्यसमा मुछिन थालेपछि एकाएक प्रधानमन्त्रीले अनुसन्धान रोके, बुझाएको अनुसन्धान रिपोर्ट प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै बाहिर निस्कन दिएनन्, यसबाट थाहा हुन्छ, ओली सुशासनका पक्षमा छैनन् ।
तस्कर, हिंसावादी, अपहरणकर्ताहरुका लागि ओली सरकार बरदान हुनथाल्यो । अव कुनै डनले तर्सनुपर्दैन, यो सरकारले इन्काउण्टर गर्दैन । कोही पक्राउ परिहाले, ओली सरकारका मन्त्रीले नै बचाउ गर्नेछ । ओली सरकार अराजक सरकार बन्यो ।
सार्कको अध्यक्ष नेपाल, सार्क सम्मेलन नगरी विमस्टेक सम्मेलनलाई नेपालले प्राथमिकता दियो । यो भारतीय लाइन हो कि नेपालको परराष्ट्रनीति । यसैवीच नाङ्ले अखबारमा भारतवादीहरुको सार्कभन्दा बिमस्टेक ठिक भन्ने लेख धमाधम आउन थालेका छन् । किनकि बिमस्टेकमा चीन र भारत संलग्न छैन । चीनलाई देखाउन र पाकिस्तानलाई एक्लाउन खोजेको भारतको यो प्रचार प्रकरणले बिमस्टेकको उद्देश्य प्रष्ट छ । तैपनि नेपालले सार्कको १९औं सम्मेलन गराउन प्रयास नगर्नु भारतकै पिछलग्गु बन्नु होइन त ? यसैवीच दिल्ली पुगेका प्रचण्ड नेकपाका अध्यक्ष पनि हुन् । उनले दिल्ली पुगेर सार्कको बारेमा कुरा उठान गरेनन् । यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ, नेकपा भारतको लाइफलाइनमा चल्न थालिसकेको छ ।
यी सबै घटनाक्रमले के स्पष्ट हुन्छ भने दुई तिहाईको सरकार कमजोर रहेछ । यो सरकारभन्दा छ बलात्कारी, हत्यारा पो बलियो देखियो । यिनको स्वाभिमान भन्दा भारतीय हैकमपो कडा लाग्न थाल्यो । भारतको हैकम कडा भएपछि सार्कभन्दा बिमस्टेक जाति भनेर नेपालमा प्रचार हुनुथियो, लोकराज बरालहरु जुटेका छन् ।
सार्वजनिक महत्वको दुई प्रश्न
१. उपेन्द्र यादवलाई कालो झण्डा देखाएको निहुँमा पक्राउ गरेर सीके राउतको बिखण्डनवादी भन्ने आरोप लगाइएका मनोहर यादव पक्राउ भएकै अवस्थामा मारिए, उनी मारिएपछि त्यसको जिम्मा प्रहरीले लिनुपर्छ कि पर्दैन ?
उनी उच्च रक्तचापका विरामी रहेछन् । उनले ब्लड प्लेसरको औषधि चाहियो भन्दा पनि प्रहरीले दिएन । यादवका निकटहरु भन्छन्– एक त सकस दिइयो, कुटपिट गरियो, त्यसमाथि औषधि दिइएन र उनलाई मारियो । यसको छानबिन गरेर दोषीमाथि कारवाही गर्न सक्दैन भने के को नयाँ संहिताको कुरा गर्ने ?
२. यो के हो ? गृहमन्त्रीमथि शक्तिशाली भनिएका पत्रिकाले यसरी प्रचार गर्ने छुट पाउँछन् । नयाँ संहिताले यस्तो अनुमति दिएको छ । खोइृ यिनलाई कसैले प्रश्नसम्म गरेनन् । यही हो ठुलाई चैन, सानालाई ऐन भनेको । यस्तो प्रचारवाजी भएपछि भन्न थालिएको छ, ओली सरकारबाट यिनी र यिनीजस्ता ५ मन्त्री आउट हुनेवाला छन् ।